KnIC – Page2– Karenni Information Center
တရားစွဲခံ ကရင်နီလူငယ် ၄ ဦး လွိုင်ကော် ထောင်အချုပ်တွင်းမှ တရားရင်ဆိုင်မည်
KnIC ကရင်နီသမိုင်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ကိုကန့်ကွတ်ကြောင်းစာရွတ်များဖြန့်ဝေသောကြောင့်ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုခံထားရသည့်လူငယ်၎ဦးသည်အာမခံမယူဘဲအချုပ်ထောင်အတွင်းမှတရားရင်ဆိုင်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးယနေ့ရုံးချိန်းအပြီးတွင်တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်လွိုင်ကော်အကျဉ်းထောင်အချုပ်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် လူငယ်များသည် လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ကရင်နီသမိုင်း နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်ကို ကန့်ကွတ်ကြောင်း စာရွတ်များကို ကရင်နီပြည် (ကယား)အတွင်းရှိ
တောင်တန်းပြည်မ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကို လှူလိုက်ပါ
“တကယ်တော့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မုန်းတီးလို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုဦးဆောင်တဲ့ လူငယ်တွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တစုံတရာလေးစားမှုရှိပြီးသားဖြစ်သူတွေပါ။ သို့ သော် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသေးတဲ့အချိန် အခုလိုရုပ်ထုထားတာမလိုအပ်သေးသလို ရုပ်ထုထက်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုလားကြတာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ကတိကဝတ်အများကြီးပါတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို
ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ် အတွင်းရေးမှူး (၂) ခွန်းသောမတ်စ်နှင့် အင်တာဗျူး
“ကျနော်တို့ ပြောချင်တာကတော့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘောထားကိုဘဲ ကောက်ခံဖို့ ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရလုပ်တာက ရွေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအားလုံးရဲ့ သဘောထားကိုလဲ ကောက်ယူမဲ့သဘောမျိုးဗျ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေဘဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်၊ အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူတွေ၊ မနေ့ တနေ့ က လာနေတဲ့သူတွေ၊ ဧည့်သည်တွေရဲ့ သဘောထားကိုပါကောက်ယူမဲ့သဘောမျိုး သူတို့ လုပ်မှာ” ကရင်နီပြည် (ကယား)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ထု ကန့် ကွက်ရေး ကရင်နီအမျိုးသားလူငယ်များမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်
ကရင်နီပြည် (ကယား) လွိုင်ကော်မြို့ ရှိ ကန္ဒာဟေဝန်ပန်းခြံတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ထားရှိမည့်အပေါ် ကန့် ကွက်သည့် လှုပ်ရှားမှုကို ကရင်နီအမျိုးသားလူငယ်များမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်နေသည် ဟု သိရသည်။ ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို မခံယူဘဲ ကြေးရုပ်ထုထားရှိမည့်အပေါ် ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူတွေ ပိုမိုသိရှိအောင် အခုလိုလှုပ်ရှားမှုမျိုး ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပြီး ကြေးရုပ်ကို မဖြစ်မနေထားရှိသွားမည်ဆိုပါက လူထုလှုပ်ရှားမှုများ
သီးခြားလွတ်လပ်သော ကရင်နီပြည်၊ မြန်မာပြည်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာခဲ့ခြင်း နှင့် ကယားပြည်နယ်ဟု အမည်ပြောင်းလဲလာခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းရုပ် လွိုင်ကော်တွင်တည်မည့်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြု၍ ကယားပြည်နယ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆက်စပ်မှု ရှိ/မရှိ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဆူဆူညံညံကြားမြင်နေရသည်။ မြန်မာပြည်၏လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဖြစ်၍ ကယားပြည် နယ်တွင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တု ထားရှိသင့်သည်ဟု အချို့ကထောက်ခံပြီး ကယားပြည်နယ်သည် သမိုင်းကြောင်းအရ သီးခြား လွတ်လပ်သော ကရင်နီပြည် အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့်
ခွေးဂေဟာ တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်သည် ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက် ကို ဖြုန်းတီးရာရောက်သည်ဟုဆို
ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး အသစ်ဆောက်ရန် သန်း ၂၄၀ တောင်းခံမှု လွတ်တော်ပယ်ချ
လွိုင်ကော်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ် ထားရှိမည့်အစီအစဉ် ပြည်နယ်လွတ်တော် မသိရ
July 10, 2018 aungnge 0
June 17, 2018 aungnge 0
July 7, 2018 aungnge 0
June 13, 2018 aungnge 0
June 11, 2018 aungnge 0
ကရင်နီပြည်တောင်သူ လယ်သမားသမဂ္ဂ ခူးတူရယ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
June 10, 2018 aungnge 0
Copyright © 2018 KnIC. Theme: ColorNews by ThemeGrill. Powered by WordPress.